सन्तोष भन्दा ठूलो सुख केही छैन - शोलुसन
सन्तोष भन्दा ठूलो सुख केही छैन
अनलाइनखबर सोमबार, चैत्र २४, २०७६
एउटा नीतिकथा छ ।
एक गरिब माझी सधैं झै माछा मार्न नदीतर्फ लागे । साँझ छिप्पन लाग्दासम्म उनले एउटै गतिलो माछा फेला पारेनन् । संयोगले जालोमा एउटा सुनौलो माछा प¥यो । त्यस्तो माछा उनले कहिल्यै देखेका थिएनन् । अचम्म के भयो भने, उक्त सुनौलो माछा विलौना गर्दै रुन थाल्यो । माझीको मन पग्लियो, उनले माछालाई नदीमा छाडिदिए ।
साँझ माझीले आफ्नी श्रीमतीलाई उक्त अनौठो घटनाबारे सुनाए । दुबैले त्यसदिन केही नखाई रात काट्ने निधो गरे ।
राती उनीहरु भोकले निदाउन सकेनन् । श्रीमतीले भनिन्, ‘त्यो सुनौलो माछा पक्कैपनि अरु सामान्य माछा जस्तो होइन । तिमीले उसलाई गुण लगाएका छौं । त्यस बापत केही खानेकुरा माग्ने हो कि ?’
श्रीमतीको इच्छा अनुसार माझी नदीमा गए र सुनौलो माछालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तिम्रो प्राण बचाइदिए बापत हामीलाई केही खानेकुरा दिन सक्छौं ?’ नभन्दै सुनौलो माछा देखा प¥यो र भन्यो, ‘तिम्रो कामना पुरा हुन्छ, घर फर्क ।’
माझी घरमा पुग्दा थरीथरीका मिष्ठन्न परिकारले भरीभराउ थियो । माझी दम्पतीले भरपेट खानेकुरा खाए । उनीहरुसँग मनग्ये खानेकुरा जगेडा रह्यो । केही दिनपछि माझीकी श्रीमतीले भनिन्, ‘खानको लागि अब हामीलाई चिन्ता भएन । तर, कति दिन यहीँ झुपडीमा रात कटाउने ? अलि गतिलो घर भए हुन्थ्यो । सुनौलो माछाले हाम्रो यो इच्छा पनि पुरा गर्नेछ ।’
माझीलाई भने श्रीमतीको कुरा चित्त बुझेन । उनले सुनौलो माछासँग अरु पनि माग राख्न उचित ठानेनन् । तर, श्रीमतीले करकाप गरेपछि उनी बाध्य भए र नदी किनारमा पुगे । उनले सुनौलो माछालई सम्बोधन गर्दै आफुहरुको लागि राम्रो घर आवश्यक रहेको बताए । यसपटक पनि सुनौलो माछा देखाप¥यो र भन्यो, ‘तिम्रो इच्छा पुरा हुनेछ ।’
माझी घर फर्कदा उनको झुपडीको ठाउँमा आकर्षक र सुविधायुक्त महल थियो । माझी दम्पतीका लागि अब खान र बस्नको कुनै चिन्ता रहेन । तर, केही दिन बित्न नपाउँदै माझीकी श्रीमतीले गुनासो गरिन्, ‘यत्तिका ठूलो घर छ । अब आफ्नै खेतीबाली, गाईबस्तु पनि भए हुने ।’ यसपटक पनि बुढो माझी बाध्य भएर श्रीमतीको इच्छा पुरा गर्न सुनौलो माछाकहाँ पुगे । अन्ततः उनीहरुको यो मनोकांक्षा पनि पुरा भयो ।
यद्यपि श्रीमतीको इच्छा थपिदै गयो । उनले अब सुनौलो माछासामु नोकरचाकर पनि चहिने कुरा राख्न बुढो माझीलाई बाध्य बनाए । सबै कुरा पुरा हुँदै गएपछि श्रीमतीको मन अघाएन । बरु, उनको महत्वकांक्षा बढ्दै गयो । उनले आफु एउटा छुटै साम्राज्यको शासक बन्ने इच्छा गरिन् । सुनौलो माछाले उनको इच्छा पुरा गर्दै गए । उनी महारानी भइन् ।
माझी दम्पती अब एक शक्तिशाली शासक भए । उनीहरुसँग कुनै कुराको कमी भएन । धन–सम्पति, सुख–सयल सबै थियो ।
एकदिन महारानीलाई लाग्यो, ‘सबैकुरा मेरो वशमा छ । मेरो इच्छा अनुसार नै रैतीहरु चल्नेछन्, मुलुक चल्नेछ । तर, यो प्रकृति मेरो अधिनमा छैन । रात र दिन मेरो निर्देशनमा चल्दैन ।’ यही कुराले उनलाई बेचैन बनायो । प्रकृतिलाई पनि आफ्नो इच्छा बमोजिम चलाउन पाए हुन्थ्यो भनी उनले श्रीमानसँग गुनोसो पोखिन् । श्रीमानले उक्त कुरा संभव नहुने भन्दै श्रीमतीलाई सम्झाउने प्रयास गरे । तर, श्रीमतीले आफनो ढिंपी छाडिनन् । यदि श्रीमानले आफ्नो इच्छा सुनौलो माछासामु नराखेमा कठोर सजाय दिने धम्की दिइन् ।
श्रीमानको केही लागेन । उनी एकदमै असहज मान्दै नदीको किनारमा गए । सुनौलो माछालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नी श्रीमतीको इच्छा सुनाइदिए । सुनौलो माछाले भन्यो, ‘ठिक छ, तिमी घर जाउँ ।’
उनी घर फर्किए । तर, अनौठो भयो ।
न त्यहाँ उनीहरुको साम्राज्य थियो, न दरबार । न रैती, न नोकरचाकर । सुरुको अवस्थामा जुन झुपडी थियो, त्यही मात्र बाँकी थियो ।
हाम्रो आवश्यक्ता र चाहनाहरु कहिल्यै पुरा हुँदैन । जब हामी आफ्नो गुजारा चलाउने स्रोत पाउँछौं, तब ऐश–आरम खोज्नतर्फ लाग्छौं । घर, गाडी, गर–गहना, जग्गा–जमिन जोड्ने आकंक्षा रख्छौं । सार्थक श्रमले यावत् आकंक्षा पुरा हुँदै जान्छ पनि । तर, त्यो विन्दुमा पुगेर हामी सन्तोष मान्दैनौ कि, जहाँ सबै कुरा पुगिसरी छ । सबैकुरा पुगिसरी भएरपनि हाम्रो महत्वकांक्षा बढ्दै जान्छ । हामी विलासी जीवनको खोजीमा लाग्छौं । असीमित धन–सम्पतिको स्वमी बन्ने आकंक्षा राख्न थाल्छौं ।
हामीकहाँ नेता–मन्त्री, कर्मचारी, व्यापारी आदि भ्रष्ट हुने भनेको पनि यस्तै महत्वकांक्षाले हो । उनीहरुसँग अपुग केही हुँदैन । तर, मन भने सधै दरिद्र हुन्छ । सुकिलो लुगामा ठाँटिएपनि, चौरासी ब्यान्जन खाएपनि, विलासी गाडी र घर उपभोग गरेपनि, पर्यात बैंक ब्यालेन्स राखेपनि उनीहरु सन्तोष मान्दैनन् । त्यही असन्तोषले उनीहरुलाई भ्रष्ट बन्न उक्साउँछ ।
जब हामीमा इच्छा र आकंक्षा बढ्दै जान्छ, लोभ–लालस पैदा हुन थाल्छ । हरेक कुरामा हामी ¥याल काड्न थाल्छौं । धन–सम्पति, सुख–सयल, मोज–मस्तीको चक्करमा हामी जस्तोसुकै कृत्य समेत गर्न पछि पर्दैनौं । आखिर त्यही दलदलमा फसेर हाम्रो पीडादायी अन्त्य हुन्छ ।
कतिले पुग्छ ?
एक धनाड्य व्यक्ति मृत्युको मुखमा थिए । छोराछोरी, नातेदार, आफन्त, इष्टमित्र आसपासमा बसेर उनको पीडा कम होस् भनी थमथमाइरहेका थिए । सान्तवाना दिइरहेका थिए । तर, ति धनाड्य भने जोड–जोडले रोइहेका थिए । उनी यसकारण रोइरहेका थिएनन् कि, आफ्नो मृत्यु हुँदैछ । बरु आफ्नो शेषपछि सन्तानले दुःख पउने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । जबकी उनीसँग पर्याप्त धन–सम्पति थियो, जो पाँच पुस्तासम्मलाई बसीबसी खान पुग्थ्यो । तब उक्त धनाड्यलाई सोधियो, ‘किन विलौना गरिरहनुभएको छ ?’
उनले निकै दुःखी हुँदै भन्यो, ‘पाँच पुस्तासम्मलाई त खान–लाउन अभाव हुनेछैन । तर, छैठौं पुस्ताको हालत के होला ?’
आफ्ना सन्ततीको भविष्यप्रति चिन्तित हुनु अन्यथा भएन, तर मान्छेमा लोभको आयम कति टाढासम्म फैलिएको हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो कथा । हामीमा जति–जति इच्छा र आकंक्षाको आकार बड्दै, त्यो कुनै विन्दुमा पुगेर पुरा हुँदैन ।
हामी धनाड्य हुन चाहन्छौं, तर कति धन भएपछि हाम्रो मन भरिएला ?
हामी सुख–भोग गर्न चाहन्छौं, तर कति सुख–सुुविधा भए हामीलाई पुग्छ ?
संसारमा उपलब्ध यी भौतिक कुराहरुको कुनै सीमितता छैन । साथै हाम्रा इच्छा–आकंक्षा यसले कहिल्यै पूर्ण गराउन सक्दैन । आज हामी किन चिन्तित छौं ? किन दुःखी छौं ? किन बेचैन छौं ? किनभने हाम्रा इच्छा र आकंक्षाहरु पूर्ण छैनन् । हामीले आफैभित्र अभाव, दरिद्रता अनुभव गरिरहेका छौं । यसैले हामीलाई पिरोलेको छ । नतिजा, हामी तनावग्रस्त छौं । उच्च रक्तचाप, डिप्रेसनको रोगी हुँदैछौं ।
इच्छा, आकंक्षा राख्नु नराम्रो होइन । तर, आफुसँग जे–जति उपलब्ध हुन्छ वा छ, त्यसमा सन्तोष गर्न सक्नुपर्छ । हामी जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि, जतिसुकै धनाड्य भएपनि सबैकुरा प्राप्त हुँदैन । सबै कुरा हामीले भोग गर्न सक्दैनौं । किनभने भौतिक कुराहरुले हामीलाई कहिल्यै तृप्त बनाउन सक्दैन ।
मानौं हामी मिठो–मसिनो खानेकुरा खाएर तृप्त हुन चाहन्छौं । चौरासी ब्यान्जन खाएपनि हाम्रो भोक मेटिदैन । हामीलाई त्यो भन्दा मीठो खानेकुराको तलतल लाग्न थाल्छ । त्यसैले त भनिन्छ नि, भोजन भन्दा भोक मीठो । ओछ्यान भन्दा निद्रा मीठो ।
आफ्नो श्रम, सीप, लगाव, मेहनतबाट जे–जति उपलब्ध हुन्छ, त्यसमा सन्तोष गर्नुपर्छ । हाम्रा पौराणिक शास्त्रहरुमा भनिएकै छ नि, सन्तोष भन्दा ठूलो सुख केही छैन ।अनलाइनखबर बाट
चम्किलो वस्तु उल्कापिण्ड हुनसक्ने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको अनुमान
यो देशमा छैनन् एकजना पनि अपराधी, खाली छन् जेल
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको डरले श्रीमतीलाई बाथरुममा थुनिदिएपछि…